Semalt बाट प्रोग्रामरहरूको लागि वेब स्क्र्याप गर्ने विस्तारहरू
यदि तपाईंले पाइथनको साथ वेबसाइटहरू स्क्र्याप गर्नुहुन्छ भने, सम्भाव्यता यो छ कि तपाईंले पहिल्यै httplib र urlib अनुरोधहरू प्रयास गर्नु भएको छ। सेलेनियम एक व्यापक पाइथन फ्रेमवर्क हो जुन विभिन्न वेब पृष्ठहरू स्क्र्याप गर्न बट्स प्रयोग गर्दछ। यी सबै सेवाहरूले भरपर्दो नतिजा प्रदान गर्दैन; त्यसो भए, तपाईले निम्न विस्तारहरू प्रयोग गर्नु पर्छ तपाईको काम पूरा गर्नका लागि:
१. डाटा स्क्रेपर:
यो एक लोकप्रिय क्रोम विस्तार हो; डाटा स्क्रेपरले आधारभूत र उन्नत वेब पृष्ठहरू दुवैबाट डाटा स्क्रैप गर्दछ। प्रोग्रामरहरू र कोडरहरूले ठूलो संख्यामा गतिशील साइटहरू, सामाजिक मिडिया वेबसाइटहरू, ट्राभल पोर्टल र समाचार आउटलेटहरू लक्षित गर्न सक्दछन्। तपाईंको निर्देशनहरू अनुसार डाटा स collected्कलन गरिएको छ र स्क्र्याप गरिएको छ, र परिणामहरू CSV, JSON, र XLS ढाँचाहरूमा बचत गरियो। तपाईं सूचि वा टेबुलको रूपमा आंशिक वा सम्पूर्ण वेबसाइट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। डाटा स्क्र्यापर प्रोग्रामरहरूको लागि मात्र उपयुक्त छ तर गैर प्रोग्रामरहरू, विद्यार्थीहरू, फ्रीलांसरहरू, र विद्वानहरूका लागि पनि राम्रो छ। यसले एक साथ धेरै सक्र्याप कार्यहरू गर्दछ र तपाईंको समय र ऊर्जा बचत गर्दछ।
२. वेब स्क्रेपर:
यो अर्को क्रोम विस्तार हो; वेब स्क्रेपरसँग प्रयोगकर्ता-मैत्री ईन्टरफेस छ र हामीलाई सुविधाजनक रूपमा साइटम्यापहरू सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ। यो विस्तारको साथ, तपाईं विभिन्न वेब पृष्ठहरू मार्फत नेभिगेट गर्न सक्नुहुनेछ र पूरै वा आंशिक साइट स्क्र्याप गर्नुहोस्। वेब स्क्र्यापर दुबै निःशुल्क र सशुल्क संस्करणहरूमा आउँदछ र प्रोग्रामरहरू, वेबमास्टरहरू, र स्टार्टअपहरूको लागि उपयुक्त छ। तपाइँको डेटालाई स्क्र्याप गर्न केवल केही सेकेन्ड लाग्छ र तपाइँको हार्ड ड्राइभमा डाउनलोड गर्नुहोस्।
यो एक सबैभन्दा प्रसिद्ध फायरफक्स विस्तार हो; Scraper एक विश्वसनीय र शक्तिशाली स्क्रीन स्क्र्यापिंग र डाटा खनन सेवा हो। योसँग प्रयोगकर्ता-अनुकूल ईन्टरफेस छ र अनलाइन टेबुल र सूचीबाट डाटा निकाल्छ। डाटा त्यसपछि पढ्नयोग्य र स्केलेबल ढाँचाहरूमा रूपान्तरण हुन्छ। यो सेवा प्रोग्रामरहरूको लागि उपयुक्त छ र XPath र JQuery प्रयोग गरेर वेब सामग्री निकाल्दछ। हामी गुगल डक्स, XSL र JSON फाईलहरूमा डाटा प्रतिलिपि वा निर्यात गर्न सक्दछौं। इन्टरफेस र Scraper का सुविधाहरू Import.io जस्तै छन्।
यो एक क्रोम विस्तार र सबैभन्दा शक्तिशाली वेब स्क्र्याप आईएन सेवाहरू मध्ये एक हो। यसले दुबै स्थिर र गतिशील साइटहरू कुकीहरू, जाभास्क्रिप्ट, पुनर्निर्देशनहरू, र AJAX बाट सम्हाल्छ। अक्टोपार्सेले अहिलेसम्म २० लाख भन्दा बढी वेब पृष्ठहरू स्क्र्याप गर्ने दाबी गरेको छ। तपाईं बहु कार्यहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ, र अक्टोपार्से सबै एकै साथ ह्यान्डल गर्ने छ, तपाईंको समय र उर्जा बचत गर्दछ। सबै जानकारी अनलाइन दृश्यमान छ; तपाईले आफ्नो क्लिक गर्न चाहानु भएको फाईलहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ।
यो उद्यम र प्रोग्रामरहरूको लागि उपयुक्त छ; पार्सेब एक फायरफक्स एक्स्टेन्सन मात्र होईन तर एक उत्कृष्ट वेब स्क्र्यापि and र क्रोलि tool उपकरण पनि हो। ParseHub AJAX टेक्नोलोजी प्रयोग गर्दछ र रिडिरेक्ट र कुकीजको साथ साइटहरू स्क्र्याप गर्दछ। यसले पढ्न र मिनेट को एक मामला मा प्रासंगिक जानकारी मा विभिन्न वेब कागजात रूपान्तरण गर्न सक्दछ। एकचोटि डाउनलोड र सक्रिय भएपछि, ParseHub ले एकै समयमा धेरै डाटा स्क्र्यापिंग कार्यहरू गर्न सक्दछ। यसको डेस्कटप अनुप्रयोग म्याक ओएस एक्स, लिनक्स, र विन्डोज प्रयोगकर्ताहरूको लागि उपयुक्त छ। यसको नि: शुल्क संस्करण पन्ध्र सम्म स्क्र्यापिंग परियोजनाहरू लिन्छ, र भुक्तान गरिएको योजनाले हामीलाई एक पटकमा 50० भन्दा बढी परियोजनाहरू ह्यान्डल गर्न अनुमति दिन्छ।